Owayesakuba yinkulumbuso kwa-Israyeli uNetanyahu une-ajenda efihliweyo eHawaii
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Owayesakuba yinkulumbuso kwa-Israyeli uNetanyahu une-ajenda efihliweyo eHawaii
isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • I-Israel Iphula Iindaba • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 21, 2021
6 imiz efundwayo
ILanai, ekwabizwa ngokuba sisiqithi sePhayinaphu yaseHawaii, yindawo yeebhiliyoni kunye nabantu abadumileyo abaya kuyo ukonwabela ubumfihlo kunye nokunethezeka. Olu luhlu lubandakanya abaququzeleli beMicrosoft, uElton John, oomongameli, kunye nabanye abaninzi. Ngoku, iNkulumbuso yangaphambili yakwa-Israyeli ibonwe eLanai, kodwa kunokubakho ngaphezulu ebalini-iyelenqe?
U-Israyeli uxelela abemi ukuba bangayi phesheya, kodwa owayesakuba yi-Nkulumbuso yase-Israeli kunye nenkokheli yeqela eliphikisayo, u-Benjamin Netanyahu, ngoku bakwiholide kwi-Island yase Lanai eHawaii.
Isiqithi saseLanai sinabanini bakaLarry Elisson, ibhiliyoni yaseMelika yaseMelika kunye nomnini wenkampani ye-Intanethi yeTekhnoloji Oracle.
U-Larry Elisson ukwangumtshutshisi-ubungqina kwityala lika-Benjamin Netanyahu elizayo lenkohlakalo kwa-Israyeli.
“Ndikwi-FAmaXesha ethu Lanai, kunye neNkulumbuso yangaphambili KwaBhenjamin Netanyahu ihlala apha, kunye neqela labakhuseli baseMossad, ”lo ngumyalezo othunyelwe lundwendwe lwehotele namhlanje.
Xa owayesakuba yi-PM ehamba, ngaba umntu unokucinga ukuba kuhlala kukho i-ajenda efihliweyo? Ngaba inkulumbuso yangaphambili yakwa-Israyeli ibonwe kwisiqithi saseLanai, ngaba le ajenda ifuna umnyama waseHawaii, okanye mhlawumbi udibana nengqina lomtshutshisi ekufanele ukuba lingqina lomtshutshisi kwityala elizayo nxamnye ne-PM?
Ngemini enye, okunye ukubhubha kunye ne-763 eyongezelelweyo ye-COVID-19 zosulelo zabhalwa e-US State of Hawaii. Ukubala ngesiqithi kubandakanya amatyala amatsha angama-469 e-Oahu, ali-123 eMaui, ali-126 kwisiqithi saseHawaii, angama-26 eKauai, ama-5 eMolokai, ama-3 Lanai, kwaye abahlali abayi-11 baseHawaii bafunyaniswe ngaphandle korhulumente.
Nge-16 ka-Agasti ka-Agasti, inkokheli ephikisayo kwa-Israyeli yabonwa ihleli kwitroli yesikhululo seenqwelomoya eSan Francisco ilinde iibhegi zayo zegalufa. Kuyabonakala ukuba, wayekude ukusuka eTel Aviv esiya kwisiqithi saseLanai eHawaii, njengoko kuchaziwe yiThe Times yakwa-Israyeli.
Ukuhlala kumaXesha amane eLanai akubizi.
Indawo yokugcina indlu Ihotele iLanai yamaXesha amaNne ixabisa i-US $ 21,000 ubusuku ngabunye, iyenza eyona ndawo ibiza kakhulu eHawaii. Esi siqithi sisekhaya kwizifundo zegalufa ezi-2, kubandakanya neManele Golf Course. Ngo-1994, umsunguli we-Microsoft uBill Gates watshata kwindawo ye-17 yekhosi.
U-PM wangaphambili unyanzelisa ukuba yena kunye nosapho bakhe bahlawulele uhambo oluya eLanai eHawaii, isiqithi esaziwa njengokubamba uninzi lwezigidi kunye neebhiliyoni ngokuhamba kwexesha.
Ngokwe-Times yakwa-Israyeli, umphathiswa wezothutho uhlala e-US nangona urhulumente ecenga ukungahambi phesheya.
Ngaphandle kokuqhambuka kwerekhodi okwahlukileyo kwe-Delta ye-COVID-19, iHawaii yamkela iindwendwe ezintsha ezingama-20-30,000 yonke imihla. Ezi ndwendwe zifika zivela kwiindawo zase-US kwaye kufuneka zibonise isatifikethi se-CDC esikhutshwe e-US okanye sivelise isatifikethi sovavanyo esikhutshwe yi-PCR.
Ke ngoko, iindwendwe ikakhulu ngabakhenkethi basekhaya okanye abahlali ababuyayo.
Akucaci ukuba iNkulumbuso ibinokuyenza njani le nto ukuba ibhabhela eHawaii ngaphandle kokuma eSan Francisco, njengoko kuchaziwe kwimithombo yeendaba yakwa-Israeli.
Isiqithi saseLanai siyinxalenye yeMaui County kwaye ngaphezulu kwama-98% ngabanini babucala yintloko yeOracle Larry Ellison.
Abahambi abancinci besiqithi abanokutyelela eHawaii, iLanai inikezela izilingo ezinkulu kwiindwendwe zayo.
Kwinkulumbuso yangaphambili, inokwenza okungaphezulu- intlanganiso kunye nomnini wesiqithi kunye nomhlobo uLarry Ellison. U-Ellison ukwangqina kwetyala elibalulekileyo kurhwaphilizo oluzayo ngokuchasene ne-Nkulumbuso yangaphambili.
Kuphela zii-9 zeekhilomitha ukusuka eMaui, ukanti umhlaba ukude, uLanai unokuziva ngathi ziindawo ezi-2. Eyokuqala ifumaneka kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezihonjisiweyo apho iindwendwe zinokuzonwabisa khona ekumgangatho wehlabathi kunye nenqanaba lobuntshatsheli. Elinye lifunyanwa libhabha kwiindlela ezimqolo zesi siqithi kwimoto etsala ngamavili amane ukukhangela ubutyebi obusendleleni. Ukuzola, ukonwaba, kunye nokuba ngasese kunokufumaneka nakweyiphi na kwi-4 Imimandla yaseLanai.
Xa i-COVID-19 hit, u-Ellison wasusa irente yeshishini eLanai, kwaye ngo-2018, waseka inkampani yempilo-ntle iSensei, ejongene ne-spas kunye neendawo zokugcina izityalo ezixhotyiswa lilanga.
U-Ellison wathenga phantse i-98 pesenti yesiqithi ngo-2012 nge-US $ 300 yezigidi. Ukuthenga kwakhe kubandakanya i-87,000 (35,200 hectares) yesiqithi se-90,000 hectares (36,400 hectares) zomhlaba.
ILanai, elihlala abantu abamalunga ne-3,200, sesona siqithi sincinci sihlala abantu eHawaii kwaye likhaya elinamabhongo azolileyo, indawo enamagingxi-gingxi, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide eziphezulu kunye neminqweno yozinzo ka-Ellison, ayenzayo ngenkampani yophuhliso ebizwa ngokuba yiPulama Lanai.
Isiqithi se-141-square-mile (i-365 sq km), esikwi-8 yeekhilomitha (13km) kunxweme lweMaui, sinerobhothi kunye neendlela ezimbalwa ezigqityiweyo, ngokwe Forbes. Xa kuthelekiswa nezinye iziqithi zaseHawaii, iLanai ivaliwe - kodwa uEllison unezicwangciso zokutshintsha loo nto. Ufuna ukuguqula iLanai kwindawo yabakhenkethi.
Okwangoku, isiqithi silikhaya kwiihotele ezimbini ezine zamaXesha amaNyaka kunye nenani leendidi zokuhlala zeB & B ezincinci.
Kwa-Israyeli, uNetanyahu ulingo lwezityholo zobuqhetseba kunye nokwaphula ukuthembela kumatyala amathathu ahlukeneyo, kunye nokunyoba kwelinye lazo. Uyabuphika ububi.
U-Ellison ungomnye wamakhulu ambalwa amangqina ezotshutshiso kwityala likaNetanyahu.
Igama lakhe kuthiwa lavela kumatyala amabini kunye nengxelo kunyaka ophelileyo wathi wacenga kwaye waqinisekisa ukuba igorha lase-Israel u-Arnon Milchan alahle igqwetha lakhe ukuze uNetanyahu amqeshe.
eTurboNews Intatheli iThetha ngokuBalulekileyo...
Ugonyo lwe-J&J COVID-Booster ngoku Lufumana ukukhanya okuluhlaza
Ukudibanisa uKhenketho oluZinzileyo naMandla aVuselelekayo
I-Bloodline yase-Italian-Ubusebenzisa njani ubumi...
Umongameli webhodi yezoKhenketho yase-Afrika uzakuthatha inxaxheba kwi...
Iingcebiso ezilungileyo zokuqinisekisa uhambo olukhuselekileyo kunye nolonwabo
Ngaba uRhulumente waseSt. Kitts & Nevis ngoku u ...
Isibonelelo seCarbon offset ngamanqaku amabhonasi ngokukhawuleza ...
Urhulumente omtsha waseJamani ukwenza intsangu ibe semthethweni
Amashishini okuhamba ukuze achithe ngaphezulu kwitekhnoloji kunyaka ozayo
Ityala lokufa elingalunganga ngoku liFakelwe uMculo weAstroworld...
I-IMEX yaseMelika ifunyenwe inetyala! Iintlanganiso Ezintsha kunye...
Ukuhamba ngeeVirgin ngoku ngokuhamba ngenqanawa ukuya eNassau naseBimini
I-Cyprus ihlutha abantu basemzini abangama-45 kwi-Visa yabo yeGolide ...
I-Ice Cube Man Vs Machine: Okokuqala Entsha NFT Drop
USanta Lucia ubhiyozela ukuvulwa kwakhona kweCanada ...
NgoMeyi, ngoMeyi ngabo bonke ooSenenja baseMelika kunye naBameli...
Uhambo lokubulela lulindeleke ukuba lunyuke luye kwi-20 yezigidi...
I-Seychelles Ibanga kwakhona iBhaso: Ukufikela kwisiQithi esiPhezulu e ...
Buyela kwi-Bahamas ngembeko ye-CHICOS isikhumbuzo se-10th
I-volcano yaseJapan iqhuma ikhupha uthuthu lweekhilomitha esibhakabhakeni
Abaqhubi boKhenketho baseTanzania bakhupha i-150 yezigidi kwi-Anti ...
Umongameli wase-US uKamala Harris kwi-NASA kuMsebenzi oNgxamisekileyo weMozulu
Ukubhukuqwa kwe-Guinea: uMongameli ubanjiwe, urhulumente wapheliswa ...
I-WHO ilumkisa ngokuqhambuka okutsha, i-US ilawula ukuvalwa
ILithuania ibhengeza imeko yonxunguphalo kwiBelarusian...
ISlovakia ukulandela i-Austria kwi-COVID-19 lockdown epheleleyo
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwempilo yedijithali yempilo yedijithali ...
2021 Global Destination Index ikhutshwe
Ukusweleka kwe-COVID-10 eRussia ngoSeptemba kuphinda-phinda kabini…
Ukuhanjiswa kwelori yokuqala eqhutywa yiCummins ukuya ePenske...
I-Sharm El-Sheikh, iindiza zeLuxor kunye neCairo eQatar ...
Ukusinda koMhlaza Wemiphunga Kwandile
I-Israel ivala iindwendwe ezivela kumazwe asixhenxe kumazantsi ...
Umyalezo omtsha: Ukukhuthaza ukuhambela abantu base-Afrika baseMelika
Iinqwelomoya ezintsha ezisuka e-Ontario zisiya e-Austin kuMazantsi-ntshona ...
INortal ifumana isigxina esincinci eTalgen
UNancy Borts uthi:
Agasti 21, 2021 kwi-14: 45
Ii-Innuendos, ukupela kakubi, izityholo ezingenabungqina. Akukho ndawo ethi inqaku u-Ellison (hayi uElisson)
wayekwesi siqithi, wadibana noNetanyahu okanye walungiselela ukuhlala nabasebenzi baka-Ellison.
Umkhethe wombhali ubonakala ngokucacileyo. Akukho ngxelo ichanekileyo okanye ihloniphekileyo!